कन्स्टेलेसन उर्सा मेजर: यो के हो, कहिले र कहाँ हामी यसलाई देख्न सक्छौं? नेटवर्क मौसम विज्ञान
आकाशमा ताराहरूको बारेमा कुरा गर्दा यसको नाम सधैं राखिन्छ ठूलो भालु। यो उत्तरी आकाशमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नक्षत्र हो र आकारमा तेस्रो ठूलो हो। आर्कटिक क्षेत्रको यसको तारा यसको प्रतीकको रूपमा छ किनकि यो यसको माथि अवस्थित छ। यो पछिल्लो बिग डिपर देख्न धेरै सामान्य छ अरोरा बोरलिस। तिनीहरू सँगै आकाशमा सबैभन्दा सुन्दर दृश्यहरू सिर्जना गर्छन्।
यस लेखमा हामी यस नक्षत्रका सबै सुविधाहरूको नामाकरण गइरहेका छौं र यसको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछौं। के तपाइँ यस महत्त्वपूर्ण नक्षत्रको बारेमा थप जान्न चाहानुहुन्छ? पढिरहनुहोस् र तपाईं सिक्नुहुनेछ 🙂
1 ठूलो डिपरको इतिहास
2 कहिले हेर्ने
3 नक्षत्रमा चम्किला तारा
4 नक्षत्र उर्स मेजरको बारेमा मिथक
ठूलो डिपरको इतिहास
यो तारामंडल हो जुन खगोलविद् टोलेमी द्वारा पहिचान गरिएको अठ्ठालीस नक्षत्र मध्ये एक हिस्सा हो। हामी दोस्रो शताब्दी AD को यात्रा गर्छौं जहाँ यो खगोलविद् यसलाई अर्क्टोस मेगाले नाम दिए। ल्याटिनमा "ursus" शब्दको अर्थ भालु हो जबकि ग्रीकमा यो "अर्क्टोस" हो। त्यसैले नाम आर्कटिक।
बिग डिपरलाई धन्यवाद, पृथ्वीको उत्तरी क्षेत्र जहाँ आर्कटिक अवस्थित छ पूर्ण वर्णन गरिएको छ। सबै मानिसहरु जो भेट्छन् + ° ० lat र -90० lat को अक्षांशमा तपाईं यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। उर्स मेजर एउटा तारामंडल हो जुन हामीले पोल तारा वरपर देख्छौं ग्रहको परिक्रमणको प्रभावको रूपमा रातको क्षितिजले नछोडी। त्यसकारण यसलाई सर्कम्पुलर पनि भनिन्छ। यसको लागि धन्यवाद, यो उत्तरी गोलार्धमा वर्षभरि हेर्न सकिन्छ।
सबै ताराहरूसँग उनीहरूसँग हेर्नको लागि उत्तम समय हुँदैन। यस अवस्थामा, सबै भन्दा राम्रो समय वसन्त .तु हो। यो नक्षत्र बनाउने ताराहरू हुन् and० र ११० मिलियन प्रकाश बर्ष बीच। चारवटा ताराहरू जुन यो रचना गर्दछन् ती मेरक, दुबे, फेक्दा र मेग्रेज हुन्।
नक्षत्रको पूंछ तीन ताराहरू मिलेर एलियोथदेखि एल्कोर र मिसार सम्मिलित हुन्छ। पछिल्ला दुईसँग विचित्रता छ कि उनीहरू डबल होइनन्। तिनीहरू प्रत्येक एक अर्काबाट तीन प्रकाश वर्ष हुन्छन्। अन्तिम प that्क्ति बनाउने लाई अल्काइड भनेर चिनिन्छ।
नक्षत्रमा चम्किला तारा
कन्स्टेलेसन उर्सा मेजरसँग धेरै चम्किला तारा छन्, र त्यसैले तिनीहरू सबैभन्दा बाहिर उभिए। ती मध्ये हामीसँग छ:
Alioth। यो निलो र सेतो बौना तारा भएर भएको हो। यो लगभग light१ प्रकाश वर्ष टाढा स्थित छ र सूर्य भन्दा १.81 with र times गुणा ठूला बीचको परिमाण संग यो १२ 1,75 गुणा उज्यालो छ। मात्र, धेरै दूरीमा हामी यसलाई सानो देख्छौं।
फेक्डा यो सेतो माध्यमिक हो जुन 84 light प्रकाश वर्ष टाढा छ। यो २.2,43 को परिमाणसँग चम्किन्छ र सूर्य भन्दा times१ गुणा चम्किला हुन्छ।
मेग्रेज यो एक निलो र सेतो तारा हो जुन 58,4 63. light प्रकाश वर्ष टाढा टाढा छ र सूर्य भन्दा% more% बढी विशाल र १ 14 गुणा बढी चमकदार छ।
अलकाइड यो सेतो र निलो को एक मुख्य अनुक्रम भएर अन्य ताराहरु बाट अलग छ। यो हाम्रो सौर्यमण्डलबाट १०० प्रकाश वर्षमा अवस्थित छ जुन आकारको छ गुणा सूर्य र 100०० गुणा बढी चमकदार छ।
मिजर र Alcor डबल स्टार को रूप मा पहिचान गर्न सकिन्छ। तिनीहरू रातको आकाशमा सबैभन्दा धेरै देखिनेहरू हुन्। तिनीहरू हार्स र राइडरको रूपमा चिनिन्छन् र रंग सेतो छ। तिनीहरू light० प्रकाश वर्षको दूरीमा अवस्थित छन् र २.२80 को परिमाणसँग मिजर चम्किरहेको छ र c.०१।
दुबे यो एक विशाल स्टार हो जुन करिब १२० प्रकाश वर्ष टाढा हुन्छ। यद्यपि यो तारा भन्दा times०० गुणा चम्किलो सूर्य हो। यो बाइनरी प्रणाली हो जुन प्रत्येक forty० बर्षमा एक अर्कालाई चक्कर लगाउँदछ।
मेरक यो सेतो ताराको रूपमा चिनिन्छ र light light प्रकाश बर्ष टाढा छ। यो सूर्य र यसको द्रव्यमानको त्रिज्या हो। यो times० गुणा उज्ज्वल भएकोले विशेषता हो।
नक्षत्र उर्स मेजरको बारेमा मिथक
यस तारामंडल इतिहास भरि असंख्य नामहरू र तथ्या figures्कहरूले यसलाई हेर्ने ठाउँ र प्रत्येक देशको विश्वासको आधारमा पार गरेको छ। उदाहरण को लागी, रोमीहरू उनको ड्राफ्ट गोरुमा देखेर हाँसे। अरबहरूले क्षितिजमा एउटा कारवां देखे। अन्य समाजले तीनवटा ताराहरू देख्न मद्दत गर्दछ जुन पुच्छरको रूपमा कार्य गर्दछ र सम्भावना छ कि यी कुकुरहरू हुन् कि उनीहरूको आमालाई पछ्याउँदछन्। तिनीहरू भालूलाई पछ्याउने शिकारी पनि हुन सक्छन्।
क्यानाडाका इरोक्वाइस भारतीयहरू र नोभा स्कोटियाको मिकमाकहरूले भालुलाई सात योद्धाहरूले शिकार गरेको हो भनेर व्याख्या गरे। विश्वासका अनुसार यो सतावट प्रत्येक वर्ष वसन्त inतुमा सुरु हुन्छ। यो भालुले कोरोना बोरेलिसमा खोला छोड्दा सुरु हुन्छ। जब शरद arriतु आइपुग्छ, भालु शिकारीहरू समातिन्छ र फलस्वरूप, मर्दछ। यसको कंकाल आकाशमा रहन्छ जबसम्म अर्को भाँडा यसको गुफाबाट नयाँ भालु देखा पर्दैन।
अर्कोतर्फ, चिनियाँहरूले बिग डिपरको ताराहरूलाई उनीहरूको जनतालाई खाना दिन कहिले थाहा पाउने भन्ने तरिकाको रूपमा प्रयोग गर्थे। यसले उनीहरूलाई खानाको अभाव भएको समयमा संकेत गर्‍यो। नक्षत्रको यो कथा भन्छ कि अर्तिमिस देवीलाई आफूलाई शरीर र आत्मा समर्पण गर्ने अप्सरा कलिस्टोले जेउसको ध्यान खिचे। पछि उसले उनलाई धोका दियो र, देवीको रानी, ​​अर्कास नामको छोरालाई जन्म दिएपछि हेरा क्रोधित भइन् र क्यालिस्टोलाई भालुमा परिणत गरे।
वर्षौंपछि, जब अर्कास शिकार गर्न गए, उनले अन्जानमै भालूलाई मार्न लागेका थिए जब जेउसले हस्तक्षेप गरे र क्यालिस्टो र अर्कासलाई भालुमा परिणत गरे। आकाशमा उर्स मेजर र उर्स माइनरको रूपमा, क्रमशः यस कारणले गर्दा यी नक्षत्रहरू घुमाउरो छन् र उत्तरी अक्षांशबाट हेर्दा क्षितिजको मुनि कहिले डुब्दैनन्।
यो नयाँ ज्ञानको साथ तपाईं नक्षत्र उर्स मेजरको बारेमा बढि जान्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं यसलाई आकाशमा देख्नुहुन्छ। हामी बसेको ब्रह्माण्डको बारेमा अझ बढी जान्न हाम्रो आकाशमा के छ भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। यस नक्षत्र जत्तिकै सामान्य कुरा ध्यान नदिई जान सक्छ 🙂
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » महान भालु